"မဲလို့ ချစ်တာ" တဲ့ - Barnyar Barnyar
“နင်နဲ့ငါ လမ်းခွဲရအောင်ဟာ”… ရုတ်တရက် ထပြောလိုက်တဲ့ သူမစကားကြောင့် သောက်လက်စ ကော်ဖီခွက်ပါ ပြုတ်ကျမလိုဖြစ်သွားတယ်။
“ဟင် ငါဘာလုပ်မိလို့” “ဘာမှလုပ်လို့မဟုတ်ပါဘူး ဒီတိုင်းပဲ”… “ဟာ ဒါဆို ပြောလေ… ခုဟာက ပလိန်းကြီး” နဲနဲတော့ ပေါက်သွားတယ်… ခုနကလေးတင် ဟီးဟီးဟားဟားနဲ့ အကောင်းကြီး ခုကျမှ ထပြီး ပြတ်ပြီတဲ့။
“နင်က အသားမဲလို့” တိန် ! သေရော… သူမ ကျနော့်ကို ဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက အသားမဲလို့တဲ့။ မျက်ရည်ပါဝဲချင်သလိုလိုဖြစ်သွားတယ် …။ “နင်ကလဲ ငါက အစကတည်းက မဖြူတာလေ ခုကျမှ ထမဲနေလို့လား ပြော” စဉ်းစားကြည့်… ကျနော်က မွေးရာပါ အသားမဲ… ခုကျမှ ထပြီး အသားမဲလို့တဲ့ စိတ်နာဖို့တောင် ကောင်းသေး။
“ဟုတ်တယ် နင်မဲတာ ငါလက်ခံတယ် အပြစ်မပြောဘူး… ဒါပေမယ့်ဟာ ငါနဲ့တွဲတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ ဖြူလာပေါ့ နင်က ငါ့ကိုရွဲ့ပြီးများ ပိုမဲအောင် လုပ်နေလားမသိဘူး.. တကယ်စိတ်ကုန်တယ်… နင်နဲ့ငါ အပြင်သွားတိုင်း လူတွေကမေးတယ် တစ်ယောက်ထဲလား ဘယ်သွားမို့လဲတဲ့ ငါဘယ်လောက် ရှက်လဲ နင်သိလား?
နင်က မဲတော့ သူတို့က ဘယ်မြင်ပါ့မလဲ? ဘော်ဒါတွေ ကြားထဲဆို အလှောင်ခံရတယ် မီးသွေးရောင်းကောင်းလားတဲ့ ငါဘယ်လောက် ဝမ်းနည်းရလဲ? ငါ Facebook ပေါ်မှာ Couple ပုံလှလှလေး တင်ချင်တယ် ဒါပေမယ့်… ကျီးကန်း ဘဲဥချီထားတာလား?
ကတ္တရာလမ်းပေါ် ဖြတ်မောင်းလာတဲ့ ပြိုင်ကားအဖြူရောင်လေး? နွားနို့ခွက်ကို ကိုင်ထားသော အသားမဲကုလား? အဲ့လိုတွေ လာလာပြောမှာ… ငါသိတယ် နင်ကမဲလို့ မရှက်ပေမယ့် ငါကဖြူတော့ ရှက်တယ်။ ငါလည်း နင်ဖြူလာနိုး ဖြူလာနိုးနဲ့ စောင့်နေပါသေးတယ်…
ခုဟာက လွန်တယ် ၂.နှစ်နီးပါး တွဲလာတယ် ဒါတောင် မဲတုန်း။ နင့်တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဖြူတာဆိုလို့ သွားပဲရှိတာ နင်သိရဲ့လား? နင်က မဲတာမှ Professional ကျကျကို မဲတာ”… ဒေါသက ထောင်းကနဲ ထွက်သွားပြီလေ… ခုဟာက လူကို သက်သက်ကြီး ဖဲ့နေသလို ဖြစ်နေပြီ သူကပဲ ဖြူလို့ ရှက်ရတယ်ရှိသေး မဲတဲ့သူက ဘာမှမပြောရဘူး… စိတ်လည်း အကြီးအကျယ် နာသွားမိတယ်။
“ကောင်းပြီလေ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ… ငါက ဒီတစ်သက် သေတာတောင် ဖြူလာမှာမှ မဟုတ်ပဲ အဲ့တော့ နင်ဖြစ်စေချင်သလို လမ်းခွဲပေးပါ့မယ်”… “ယေး !!! ကျန်းကျန်း ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ မွက်ခ်ျ မွက်ခ်ျ” Aww ! နောက်ဆုံးလမ်းခွဲအတွက် အာဘွားပါ ၂.ခါ ပေးသွားသေး… ပျော်ရမလိုလို ထိုင်ပဲငိုချရမလိုလို။
သူမနဲ့ပြတ်ပြီးနောက်ပိုင်း… ကိုယ့်အသားအရေကိုကိုယ် စိတ်နာမိတယ် အမြင်ကပ်မိတယ် ပြော ပြောချင်စရာပဲ ခုမှ ပြန်ကြည့်မိတယ် မဲတာမှ ပြောင်လက်နေတာပဲ… င်္အကျီအဖြူကပ်ရင် မဲတာက ထင်းကနဲ။ အမဲရောင်ဝတ်လိုက်လို့ကတော့ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပျောက်နေတာ အရိပ်ပဲမြင်ရတယ်။ အရောင်တောက်တောက်ဝတ်လည်း အဆင်မပြေ အရောင်ဖျော့ဖျော့ကျပြန်တော့ မပေါ်နဲ့… တိုင်ပတ်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့ တကယ်။
ဒီလိုနဲ့… ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုချလိုက်တယ်.. ငါ အသားဖြူလာအောင် ကြိုးစားတော့မယ်လို့။
အရင်ဆုံး Online Shopping က အသားဖြူဆေး ဝယ်လိုက်တယ်.. လိမ်းဆေး သောက်ဆေး (2) မျိုးလုံးပဲ ဆိုပါတော့ အချိန်သာ ကုန်သွားတယ် မဲလက်စ မဲကောင်းတုန်း။ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက် နေမထိအောင် နေတယ်.. လတွေ နှစ်တွေသာ ကြာသွားတယ်.. မဲတာက တစ်စက်ကလေးမှ မပျောက်ဘူး။
စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ထုံးတွေ တစ်ကိုယ်လုံးသုတ် ရေနွေးအပျော့အိုးထဲ ထိုင်စိမ်နေတယ် နာရီပေါင်းများစွာ အသားတွေသာ ကွက်သွားပြီး ခရုသင်းလိုလို ဖြစ်ကုန်တယ်.. အချိန်တန်ရင် ငမဲက ငမဲပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ကူးမိတယ်… မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လို အရေပြားလှန်လိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့ပေါ့…။
နောက်တော့လည်း စိတ်က တစ်မျိုး ပြောင်းသွားတယ်။ ဒီလောက်မဲတဲ့အသား မဲစမ်း မဲစမ်း ဆိုပြီး… တစ်နေကုန် နေပူထဲ ထိုင်နေပေးလိုက်တယ်… ရေမချိုးပဲ တစ်လလောက် နေပေးလိုက်တယ်…
မုန့်ကုလားမဲချည်း လှိမ့်စားပေးလိုက်တယ်… Black Coffee တစ်နေ့ ၅.ခွက်သောက်… ဆံပင်က အနက် All Black … ကောက်ညှင်းငချိတ်ကို Daily ဆွဲပေးတယ်… အမှောင်ထဲမှာနေ လမိုက်ညမှ အပြင်ထွက်… ဘော်ဒါတွေဆို အသားမဲမှ ရွေးပေါင်းတယ်…။
မယုံမရှိနဲ့ အဲ့ချိန်ကစ SKB ဖြစ်တာ… မဲရင်လည်း အဲ့လို ပြောင်လက်နက်နေအောင် မဲလိုက် ဟိုမရောက် ဒီမရောက် မဲတာ သွားမလုပ်နဲ့။ ခုရတဲ့ ကောင်မလေးက ဖြူဥနေတာပဲ သိလား.. ရှုပ်လို့ ခွါချတာတောင် အနားကထွက်မသွာဘူး.. မျက်စိနောက်လို့ အော်ထုတ်ရင်တောင် ပေကပ်ကပ် နင်ငါ့ကို ဘာလို့ အဲ့လောက် ချစ်လဲ? မေးတော့…
“မဲလို့ ချစ်တာ” တဲ့… “ကြိုက်တယ် အဲ့လိုပဲ ဖြစ်နေရမယ်” ငါကှ SKB ငမဲ…။ ။ 😂😂😂
“မဲလို့ ခဈြတာ” တဲ့
“နငျနဲ့ငါ လမျးခှဲရအောငျဟာ”… ရုတျတရကျ ထပွောလိုကျတဲ့ သူမစကားကွောငျ့ သောကျလကျစ ကျောဖီခှကျပါ ပွုတျကမြလိုဖွဈသှားတယျ။
“ဟငျ ငါဘာလုပျမိလို့” “ဘာမှလုပျလို့မဟုတျပါဘူး ဒီတိုငျးပဲ”… “ဟာ ဒါဆို ပွောလေ… ခုဟာက ပလိနျးကွီး” နဲနဲတော့ ပေါကျသှားတယျ… ခုနကလေးတငျ ဟီးဟီးဟားဟားနဲ့ အကောငျးကွီး ခုကမြှ ထပွီး ပွတျပွီတဲ့။
“နငျက အသားမဲလို့” တိနျ ! သရေော… သူမ ကနြေျာ့ကို ဖွတျရတဲ့အကွောငျးရငျးက အသားမဲလို့တဲ့။ မကျြရညျပါဝဲခငျြသလိုလိုဖွဈသှားတယျ …။
“နငျကလဲ ငါက အစကတညျးက မဖွူတာလေ ခုကမြှ ထမဲနလေို့လား ပွော” စဉျးစားကွညျ့… ကနြျောက မှေးရာပါ အသားမဲ… ခုကမြှ ထပွီး အသားမဲလို့တဲ့ စိတျနာဖို့တောငျ ကောငျးသေး။
“ဟုတျတယျ နငျမဲတာ ငါလကျခံတယျ အပွဈမပွောဘူး… ဒါပမေယျ့ဟာ ငါနဲ့တှဲတဲ့နောကျပိုငျးတော့ ဖွူလာပေါ့ နငျက ငါ့ကိုရှဲ့ပွီးမြား ပိုမဲအောငျ လုပျနလေားမသိဘူး.. တကယျစိတျကုနျတယျ… နငျနဲ့ငါ အပွငျသှားတိုငျး လူတှကေမေးတယျ တဈယောကျထဲလား ဘယျသှားမို့လဲတဲ့ ငါဘယျလောကျ ရှကျလဲ နငျသိလား?
နငျက မဲတော့ သူတို့က ဘယျမွငျပါ့မလဲ? ဘျောဒါတှေ ကွားထဲဆို အလှောငျခံရတယျ မီးသှေးရောငျးကောငျးလားတဲ့ ငါဘယျလောကျ ဝမျးနညျးရလဲ? ငါ Facebook ပျေါမှာ Couple ပုံလှလှလေး တငျခငျြတယျ ဒါပမေယျ့… ကြီးကနျး ဘဲဥခြီထားတာလား?
ကတ်တရာလမျးပျေါ ဖွတျမောငျးလာတဲ့ ပွိုငျကားအဖွူရောငျလေး? နှားနို့ခှကျကို ကိုငျထားသော အသားမဲကုလား? အဲ့လိုတှေ လာလာပွောမှာ… ငါသိတယျ နငျကမဲလို့ မရှကျပမေယျ့ ငါကဖွူတော့ ရှကျတယျ။ ငါလညျး နငျဖွူလာနိုး ဖွူလာနိုးနဲ့ စောငျ့နပေါသေးတယျ…
ခုဟာက လှနျတယျ ၂.နှဈနီးပါး တှဲလာတယျ ဒါတောငျ မဲတုနျး။ နငျ့တဈကိုယျလုံးမှာ ဖွူတာဆိုလို့ သှားပဲရှိတာ နငျသိရဲ့လား? နငျက မဲတာမှ Professional ကကြကြို မဲတာ”… ဒေါသက ထောငျးကနဲ ထှကျသှားပွီလေ… ခုဟာက လူကို သကျသကျကွီး ဖဲ့နသေလို ဖွဈနပွေီ သူကပဲ ဖွူလို့ ရှကျရတယျရှိသေး မဲတဲ့သူက ဘာမှမပွောရဘူး… စိတျလညျး အကွီးအကယျြ နာသှားမိတယျ။
“ကောငျးပွီလေ ဘာတတျနိုငျမှာလဲ… ငါက ဒီတဈသကျ သတောတောငျ ဖွူလာမှာမှ မဟုတျပဲ အဲ့တော့ နငျဖွဈစခေငျြသလို လမျးခှဲပေးပါ့မယျ”… “ယေး !!! ကနျြးကနျြး ခဈြဖို့ ကောငျးလိုကျတာ မှကျချြ မှကျချြ” Aww ! နောကျဆုံးလမျးခှဲအတှကျ အာဘှားပါ ၂.ခါ ပေးသှားသေး… ပြျောရမလိုလို ထိုငျပဲငိုခရြမလိုလို။
သူမနဲ့ပွတျပွီးနောကျပိုငျး… ကိုယျ့အသားအရကေိုကိုယျ စိတျနာမိတယျ အမွငျကပျမိတယျ ပွော ပွောခငျြစရာပဲ ခုမှ ပွနျကွညျ့မိတယျ မဲတာမှ ပွောငျလကျနတောပဲ… င်ျအကြီအဖွူကပျရငျ မဲတာက ထငျးကနဲ။ အမဲရောငျဝတျလိုကျလို့ကတော့ နခေ့ငျးကွောငျတောငျ ပြောကျနတော အရိပျပဲမွငျရတယျ။ အရောငျတောကျတောကျဝတျလညျး အဆငျမပွေ အရောငျဖြော့ဖြော့ကပြွနျတော့ မပျေါနဲ့… တိုငျပတျလိုကျတာ ပွောမနနေဲ့ တကယျ။
ဒီလိုနဲ့… ဆုံးဖွတျခကျြ တဈခုခလြိုကျတယျ.. ငါ အသားဖွူလာအောငျ ကွိုးစားတော့မယျလို့။
အရငျဆုံး Online Shopping က အသားဖွူဆေး ဝယျလိုကျတယျ.. လိမျးဆေး သောကျဆေး (2) မြိုးလုံးပဲ ဆိုပါတော့ အခြိနျသာ ကုနျသှားတယျ မဲလကျစ မဲကောငျးတုနျး။ အိမျထဲက အိမျပွငျမထှကျ နမေထိအောငျ နတေယျ.. လတှေ နှဈတှသော ကွာသှားတယျ.. မဲတာက တဈစကျကလေးမှ မပြောကျဘူး။
စိတျပေါကျပေါကျနဲ့ ထုံးတှေ တဈကိုယျလုံးသုတျ ရနှေေးအပြော့အိုးထဲ ထိုငျစိမျနတေယျ နာရီပေါငျးမြားစှာ အသားတှသော ကှကျသှားပွီး ခရုသငျးလိုလို ဖွဈကုနျတယျ.. အခြိနျတနျရငျ ငမဲက ငမဲပဲ။ တဈခါတဈခါ စိတျကူးမိတယျ… မိုကျကယျဂကျြဆငျလို အရပွေားလှနျလိုကျရငျ ကောငျးမလားလို့ပေါ့…။
နောကျတော့လညျး စိတျက တဈမြိုး ပွောငျးသှားတယျ။ ဒီလောကျမဲတဲ့အသား မဲစမျး မဲစမျး ဆိုပွီး… တဈနကေုနျ နပေူထဲ ထိုငျနပေေးလိုကျတယျ… ရမေခြိုးပဲ တဈလလောကျ နပေေးလိုကျတယျ…
မုနျ့ကုလားမဲခညျြး လှိမျ့စားပေးလိုကျတယျ… Black Coffee တဈနေ့ ၅.ခှကျသောကျ… ဆံပငျက အနကျ All Black … ကောကျညှငျးငခြိတျကို Daily ဆှဲပေးတယျ… အမှောငျထဲမှာနေ လမိုကျညမှ အပွငျထှကျ… ဘျောဒါတှဆေို အသားမဲမှ ရှေးပေါငျးတယျ…။
မယုံမရှိနဲ့ အဲ့ခြိနျကစ SKB ဖွဈတာ… မဲရငျလညျး အဲ့လို ပွောငျလကျနကျနအေောငျ မဲလိုကျ ဟိုမရောကျ ဒီမရောကျ မဲတာ သှားမလုပျနဲ့။ ခုရတဲ့ ကောငျမလေးက ဖွူဥနတောပဲ သိလား.. ရှုပျလို့ ခှါခတြာတောငျ အနားကထှကျမသှာဘူး.. မကျြစိနောကျလို့ အျောထုတျရငျတောငျ ပကေပျကပျ နငျငါ့ကို ဘာလို့ အဲ့လောကျ ခဈြလဲ? မေးတော့…
“မဲလို့ ခဈြတာ” တဲ့… “ကွိုကျတယျ အဲ့လိုပဲ ဖွဈနရေမယျ” ငါကှ SKB ငမဲ…။ ။ 😂😂😂